Ndokupi Kwaungawana Kupemberera Purimu In March | Save A Train
musha > Travel Europe > Ndokupi Kwaungawana Kupemberera Purimu In March
Ndokupi Kwaungawana Kupemberera Purimu In March
Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Chitima Kufamba Hungary, Chitima Kufamba Switzerland, Travel Europe
Mardi Gras Jewish munhu? pinda haradhi Purimu! vanopemberera ePurimi pazuva rechi14 uye rechi15 mazuva waAdhari, pamwedzi wegumi nemiviri pamusoro Calendar Jewish rinobatana March. Purimu ane haradhi akafanana chadenga, nevanhu kana akapfeka zvakanaka reSabata zvipfeko zvavo kana chinoshamisira rokwe - pamwe King Xerxes, Vhashti, Mambokadzi Esteri, Modhekai naHamani zvezvisarudzo dzakakurumbira zvokupfeka. Ndokupi kubatana muna mafaro? Ndivo maguta Best kupemberera Carnival Jewish ePurimi March.
Kana usiri unoziva ePurimi, regai kutivhenekera iwe. With zvokupfeka, , Mutambo uye mijenya nokunwa, Purimu imwe wechiJudha zvikuru raucous mazororo. Muchavaziva yakanaka Esther kuvhiringidza zvakaipa Hamani zvirongwa, Tsika kudhakwa uye chii hamantaschen zviri. Asi isu tiri guessing pane zvinhu zvishoma pamusoro ichi zororo kuti zvingakushamisa iwe uye uchava wakanaka kuziva kana uri urongwa pamusoro kubatana mabiko uye kupemberera Purimu.
Genoa kuenda kuMilan neTreni
Rome kuna Milan nechitima
Bologna kuMilan neTreni
Florence kuenda kuMilan neTreni
Ndiani Esther Is?
The Book raEsteri anoumba hwaro ePurimi. Nyaya inotevera Esther, uyo akasarudzwa kuti ave mudzimai uye Queen kwamambo Ahashivheroshi akatenda kuti Xerxes I wePezhiya.
Apo waMambo chipangamazano, Hamani, anonyengetedza iye kuuraya vaJudha vose vaiva muumambo hwacho, Mambokadzi Esteri muzukuru ndokugamuchirwa baba, Modhekai, anodana naye kushandisa simba kumisa ropa urongwa.
The ngano anoudzwa muBhuku raEsteri, sevatsigiri Megillah, uye rinopera Hamani akarembera uye vanhu vechiJudha kuti vaponeswe.
Brussels kuenda kuAmsterdam neTreni
London kuenda kuAmsterdam neTreni
Berlin kuenda kuAmsterdam neTreni
Paris kuenda kuAmsterdam neTreni
Interesting Facts pamusoro ePurimi:
Heino akadzikama kukurukura Starter. Maiziva here kuti Esther aiva miriwo (kana munhu flexitarian). Maererano Midrash, apo Queen Esther aigara mudare raMambo Ahashivheroshi, iye akatevera miriwo kacho dzichiva bhinzi kuitira kuti iye vaisaputsa mitemo kashrut(mitemo Mishonga). Nechikonzero ichi, pane tsika kudya bhinzi pizi kana iwe wachengeta Purimu. (Shure kwezvose, uchada chinhu utano pashure ose booze uye hamantaschen)
Brussels kuAntwerp neTreni
Amsterdam kune Antwerp neTreni
Lille kuenda kuAntwerp neTreni
Paris kuenda kuAntwerp neTreni
Kana mutambo uyu haana kuridza chinotyisa zvakakwana kare, zvino tinowana nezvipo zvakare! The ndima mubhuku raEsteri pamusoro mishloach manot iroro kuti tirege tuma zvipo, kwete kupa zvipo. Semagumo, zviri nani kutuma omumasherufu vako Goodies shamwari Via nhume, pane kuti chete kuvapa zvachose. Munhu anogona kuita somunhu zvinofambidzana tetween, saka inzwa wakasununguka rokutsvaka paishandiswa basa kana kunyange kuti zvakanaka mukomana ari erevheta kukubatsira kununura zvipo zvenyu.
kurerukirwa? We here!
The Book raEsteri ndiro chete bhuku romuBhaibheri kuti haibatanidzi Mwari zita:
The Book Esiteri kunoitawo hapana anotaura Temple, kumunyengetero, kana kuti tsika dzechiJudha yakadai kashrut [nokuchengeta kosher].
Salzburg kuenda kuVienna Chitengo chemitengo
Munich kusvika Vienna Chitoro mitengo
Graz kuenda kuVienna Chitengo chemitengo
Prague kuenda kuVienna Chitengo chemitengo
Hatisi Over Hamantaschen chete asi ...
Ivo mativi zvakaumbwa uye vakanga akati kuti akagadzirirwa kufananidzira Hamani ngowani, nzeve kana muhomwe. Kana chinhu zvishoma womanly. Vamwe vanoti Cookies izvi zvinomiririra Hamani hura (rechiHebheru zita kwavari, Hamani oznei, zvinoreva chete ichi), uye anotaura kuti tsika kwokuparadza munhu matsotsi nzeve asati aurayiwa. The matatu makona dzinomirira Mateteguru matatu ane simba simba Hamani uye akapa simba kuna Esteri kuponesa vaJudha. Chimwezve dzidziso: Nekuti shoko German homwe rinoreva "homwe" kana "muhomwe,"Ari Cookies aigona ichimirira Hamani muhomwe uye mari akapa mambo mvumo kuuraya vaJudha.
Leipzig kuenda kuBerlin Chitengo chemitengo
Hanover to Berlin Chitengo mutengo
Hamburg to Berlin Chitengo mutengo
Panyaya Food kana iwe wachengeta Purimu:
For Ashkenazi vaJudha, zvichida inonyanya wakaitwa tsika chikafu musi ePurimi anodya mativi zvakaumbwa zvokudya zvakadai kreplach uye hamantashen pastries. Kreplach ari Pasta netriangle izere pasi nyama kana huku. Hamantashen muri zvokuridza kuti chikanywa mukanyiwa akakomberedza zvekupfakira kazhinji kuitwa yemichindwe kana Poppy mbeu.
Chimwe chezvinhu dzakakurumbira tsanangudzo tsika iyi kuti zvokudya izvi mativi inomiririra Hamani matatu andibudire ngowani. zvisinei, nokuti vakati manyorero uku ngowani haana yakakurumbira Munguva ino, pane yakawanda nezvimwe, mudiki anozivikanwa tsanangudzo nei isu kudya mativi shaped zvokudya panguva ePurimi.
Berlin kuMunich Mutengo wemitengo
Frankfurt kuMunich Chitengo mitengo
Mushori kuna Munich Zvitima
Stuttgart kuMunich Mutengo yezvitengo
Mambo Ahashivheroshi ushe kubva palndia kusvikira Itiopia, kubva “Urirasire Kush.” muchiHebheru, shoko vachifamba zvinoreva zvose “India” uye “Teki.” saka, vamwe vanhu vanodya garikuni pavanenge vanopemberera Purimu. Vamwe vanodya ndiro muItiopiya akadai Ethiopian nenyemba. Kuti nokupinza garikuni dhishi enyu Purimu kudya, edza yakagochwa Turkey pamwe caramelized hanyanisi balsamic girevhi kana panko crusted garikuni cutlets pamwe cranberry uye peya chutney.
Nantes kune Bordeaux Chitengo chemitengo
Paris kuenda Bordeaux Chitengo chemitengo
Lyon to Bordeaux Chitengo chemitengo
Marseilles kune Bordeaux Chitengo chemitengo
Kuti kuva Kosher, Mambokadzi Esteri akadya miriwo vachigara King Achashverosh Palace. In wake rukudzo, vanhu vakawanda vanoshumira meatless zvokudya zvavo Purimu mutambo. Esther zvokudya yaiva nzungu, mbeu, mbeu, uye bhinzi. Uyu ndomumwe tsananguro shure netsika kudya mbeu Poppy panguva yezororo, iyo vanoenda zvikuru iconically muna Ashkenazi hamantaschen sezvo mohn zvekupfakira.
All Izvi Sounds Familiar ...
Kana tsananguro iyi ePurimi rinonzwika akajairwa, kuti zviri nokuti akafanana chinhu kunyange Mardi Gras.
Purimu uye Mardi Gras mumwe kuwa mwedzi mumwe chaizvo vasati rakakura, zvichida ari Zvitendero kuchengetwa dzazvinogara tsika dzavo. mumwe Serves, ndezvokuti, somunhu farcical sumo nguva zvakadzama zvitendero kukomba. kuvaKristu, ari nekumwisa Fat Chipiri anoshumira imwe nzira yokubudisa kuzvigutsa kutaura uye nokuzvidzora kuzvigutsa pamberi nguva muLent, yayo refu nguva kuzvida kuramba uye kunyange kuzvidzora Vairwadzisa.
Purimu kunoonekwa sezvo suo kune mhanya asi zvikuru chakakomba uye yakawandirwa nguva. The wokugadzirira Pasika kuti vaiwanzosara anotanga mangwanani pashure ePurimi.
Frankfurt kuenda kuCologne Chitengo chemitengo
Brussels kuenda kuCologne Chitengo chemitengo
Vienna kuenda kuCologne Chitengo chemitengo
Hanover kusvika kuCologne Chitengo chemitengo
Where kuti Kupemberera Purimu mabasa Europe yose
Zvino kuti isu ndakupai mashoko, ngatiregei kukuudza apo kuwana chiito!
Budapest muna March wokupemberera kuguma kwechando vakawanda tsime zvakanaka mitambo vanakidzwe. Mugovera neMugovera inonyanya kutakurwa Mukufamba. Various yokuitira uye zviitiko kupemberera Purimu muBudapest. Uyezve zvimwe, mumasinagogi anoverengeka muBudapest kusanganisira kupfuura Dohany Street musinagoge. Uyezve, ari Balint House munharaunda muzinda zvizvarwa yechiJudha muBudapest achava naHama zviitiko kuti Purimu.
Zvino Takarongwa nokuti rechipiri gore mumutsetse kubudikidza seArieri – Union Students Jewish Geneva. Saizvozvo, kune zvinopfuura 300 vadzidzi uye vechiduku kubva anotevera nyika: Siwizarendi, Furanzi, Bherujiyamu, Ositiriya, uye dzimwe nzvimbo dzakawanda. These Purim party goers will meet to celebrate Purim together over a unique vhiki muna Zurich. For matikiti uye more info, musoro kuti Ariel Facebook Page.
Yakabatanidzwa kuZurich Mutengo wemitengo
Lucerne kuenda kuZurich Mutengo wemitengo
Lugano to Zurich Zvitengo zvemitengo
Geneva kuenda kuZurich Mutengo wemitengo
gore rino, farira ePurimi Paris. The City wemwenje, The City Rudo, The City of Art. Zviri zvino guta incredible Young Jewish Morristown Purimu Party! Uyai pamwe yenyu zvikuru naka Parisian Purimu mukonde. Unogona tsvaga bato iyi at the stunning Mayo Performing Arts Center in Morristown. Chiitiko chacho Eenhede For Young Jewish Nyanzvi vakwegura 21 kuti 39. Get Tickets HERE
Brussels kuenda kuParis Chitima mitengo
Marseille kuenda kuParis Chitima mitengo
Amsterdam kuti Paris Chitima mitengo
Uyai kuburikidza nokutarira kwako girazi bhuku tikiti kuti Themed Purimu Tea Party. Hosted panguva yakanaka Aubrey Park Hotel Mubindu Room pamusoro Sunday rechi17 Kurume, 2019 pa 3pm. Nakidzwa kambani chakanaka, kudya mijenya pamusoro misikanzwa zvinhu uye kuhwina mibayiro. It chete anowana curiouser uye curiouser. The tikiti mutengo zvinosanganisira tii / kofi, makeke, scones, uye sandwiches... uye hamantaschen! Get Tickets HERE
Kusvika kunzvimbo chaunofarira kuungana nokuda ePurimi zviri nyore nechitima. Just musoro pamusoro kuti SaveATrain uye kutenga tikiti mumaminitsi, pasina pesky mari!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-purim%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / ngaabve kuti / haulla kana / kuti ru uye mumitauro yakawanda.
#Purimu #PuriminEurope #PuriminMarch #Purimparty europetravel mutambo longtrainjourneys chitima mazano Train Travel
Rovedza Kufamba Germany, Travel Europe